Soomaali isku dagaashay deegaanka Songdalen iyo qof ay boolisku qabteen - NorSom News
Soomaali isku dagaashay deegaanka Songdalen iyo qof ay boolisku qabteen
[adsenseyu1]Sida aan kasoo xiganayno warbaahinta lokalka ah ee kommunaha Songdalen, waxaa dagaal gacan ka hadal ah uu deegaankaas ku dhexmaray afar qof oo soomaali ah. Gacan kahadalkan ayaana ka dhacay guri ay afartaan qof kuwada sugnaayeen, shalay oo axad ahayd galabteedii.
Booliska ayaa sheegay inay markii ay goobta uu falkani ka dhacay ay soo garen, ay u yimaadeen qof haweenay ah oo gacanta mindi isaga dhaawacday, iyaga oo sidoo kalena sheegay inay goobtaas ku xireen nin 3o jir ah oo lagu eedeeyay inuu mindi ugu handaday dad kale oo goobta joogay. Booliska ayaa sidoo sheegay in afarta qof ee goobta ku sugnaa uu dhaxeeyay xiriir saaxiibtinimo ah, aysana wali cadeyn karin sababta keentay dagaalka gacan kahadalka ah, walina ay wadaan baaritaano ku aadan arintan.
Kommunaha Songdalen oo ka tirsan gobalka Vest-Agder ayaa waxaa gabagiisaba degan dad gaarayo 5400 oo qof. Warbaahinta lokalka ah ee deegaankaas ayaa shalay dhacdadan uga hadlayay si aad ah.
Previous articleWiil soomaali-norwiiji ah oo kaalinta 3-aad ka galay tartanka doon-wadida caalamka
Next articleKooxda waryaa Stars ee Soomaaliya oo ilaa hada la loodin la-yahay koobka Norwey-cup